Cade Muuse oo Xilkii ka Xayuubiyay Gudoomiyihii Gobolka Sool | maakhir.com
January 22, 2008 in Somalia
Garoowe:- Cade Muuse Xirsi ayaa maanta ku dhawaaqay inuu xilkii ka qaaday Gudoomiyaha Gobolka Sool Ninka lagu magcaabo Yuusuf Jaamac Dad, Cade Muuse waxa uu sheegay in Gudoomiyahaas lagu soo oogay danbiyo ah inuu lug kulahaa qabasashada Somaliland ee Gobolka Sool,walaw uu Yuusuf Arinkaasi beeniyay.
Madaxweyna ah ayaa marka uu arkay dastuurka Puntlan markuu arkay sida loogu baahanyahay Gudoomiyaha Gobolka Sool marku arkay uuna tixraacay aqoonta iyo waayo arag imada wuxuu Gudoomiyaha Gobolka Sool u Magacaabay Cumar Jaamac Saleebaan Xeerkan Ayuu waxa uu dhaqan galayaa marka uu madaxweynaha Saxiixo .
Gudoomiyaha Cusub Ee Gobolka sool ee uu maanta Xafiiska madaxweynaha kasoo baxday ayaa ah gudoomiyihii ugu da’da yaraa Ee abid soo mara tan iyo intii maamulka Puntland Uu magacaabayay Gudoomiye yaasha Gobolada .
Waxaana magacaabista Gudoomiyahan Soo dhoweeyay Waxgaradka iyo aqoonyahanada Gobolka Sool sidoo kale Gudoomiyaha Cusub ee Gobolka sool lagu wareejiyay in uu haatan ka howlgalikaro Gudaha Gobolka Sool Gaar ahaan degmada laasacaanood iyo Deegaamada Kudhow.
Gudoomiyaha Cusub Ee Gobolka Sool Cumar Jaamac Saleebaan ayaa warbaahinta warsiiyay waxana uu sheegay inuu aad ugu farax san yaahy Magcaabista Xilkaasi uuna gudanayo waajibaadka saaran hadii Eebe Idmo.
Iyadoo uu xilkan cusubna kusoo beegmay xili ku dhowaad sedax Bilood ay gacantoodu ay ka maqantahay maamulka Puntland Magaalada Laasacaanood Ee Xarunta Gobolka Sool.
Madaxweynaha Dowlada Goboleedka Puntland Max’uud Muuse Xirsi ayaa horay waxa uu xilkan u magacaabay Gudoomiyeyaal Badan hase ahaatee Gudoomiyahan ayaa waxa uu yahay Gudoomiyihii ugu horeeyay ee kusoo Beegmay Xili ay Cakirantahay Xaalada magaalada Laasacaano Ee Xarunta Gobolka Sool loona jeedo waxa uu ku soo kordhin doono.
Gudoomiyihii hore Ee Gobolka sool Ibraahim Jaamac Daad ayaa haatan Kusugan Magaalada Boosaaso isaga oo ay maalintii shalay weerar ku soo qaadeen Ciidanka Booliska ee Magaalada Bosaaso kuwaasi oo ku an dacoonaya inuu wareejiyo Gaadiid uu markasi watay kuwaasi oo Cade Musue Gudoonsiiyay markii laga dhigay Gudoomiyaha Gobolka Sool.
Talaaban uu qaaday Cade Muuse maanta ee ah Magacaabista Gudoomiyaha Cusub ee Gobolka Sool ayaa waxay ku so aadaysaa xili xaalada Gobolka Sool ay Cakiran tahay taasi oo ay dagaalo ka oogan yihiin.
« Wafti xaqiiqa raadis ah ayaa soo gaadhay Degmada Marka
UNHCR oo Qoraal ka soo saartay dadka Tahriibta ee ku qul qulaya Dalka Yeman »